warkii.com » Maxkamada Bihar oo diiday inee qabato dacwad kadhan Salman Khan iyo Karan Johar kuna saabsan kiiska Sushant!!
Maxkamada Bihar oo diiday inee qabato dacwad kadhan Salman Khan iyo Karan Johar kuna saabsan kiiska Sushant!!
Maxkamada gobolka Bihar ayaa si rasmi ah war usoo saartay kusaabsan dacwadii dhowaan la geeyay maxkamadaas ee looga soo horjeeday shaqsiyaad caanka ah shirkada Bollywood waxayna maxkamada sheegtay in dacwadaas ay gabi ahaanba diiday.
Sushant Singh Rajput markuu geeriyooday seddex maalin kadib waxaa maxkamada la geeyay dacwo ka dhan Salman Khan, Karan Johar, Ekta Kapoor, Sanjay Leela Bhansali iyo shaqsiyaad kale waana shirkadaha ugu waaweyn filimada maalgaliyaan ee Bollywood dadka iska leh waxa shaqsiyaadkan lagu heestay ayaa ahed inee sabab u ahaayen dhimashada Sushant.
Hadaba maxkamada oo lagu balansanaa 3 bishaan July in la furo dacwada ayaa gabi ahaanba diiday inee dacwadan qabato ama la dhageysto waxayna dhaheen waa dacwad aan la qaban karin dadka lasoo dacweeyay oodhana kiiskan meelna kama soo galaan.
“Salman Khan, Ekta Kapoor, Karan Johar iyo Sanjay Leela Bhansali iyo waliba shirkadaha waaweyn ee kiiska Sushant lagu soo dacweeyay ma ahaj dacwad la aqbali karo meelna kama soo gali karaan kiiska Sushant shaqsiyaadkaas ama sikale hadaan udhahno ma ahan dacwad macquul ah oo dadkaas maxkamad lagu soo saari karo.”
” marka cadeyn macquul ah marka la helo markaas kiiska iyo dacwada macquul wey noqon kartaa balse hada sharci jabin weyn ayee noqonee inaan shaqsiyaadkaas maxkmad kusoo istaajino ayadoo dacwada laga soo gudbiyay ay ahen mid heer maxkamad iyo mid heer saldhigba.”